आमा बाबु दुवै नभएकी गुल्मीकी भाईरल विमलाको बुबा बने कृष्ण कडेंल :ईन्द्रेणीमा चल्यो रु`वाबासी !(भिडियो) – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Video/आमा बाबु दुवै नभएकी गुल्मीकी भाईरल विमलाको बुबा बने कृष्ण कडेंल :ईन्द्रेणीमा चल्यो रु`वाबासी !(भिडियो)
गुल्मीकी विमला परियार सानै देखि डाक्टर बन्ने सपना देख्थिन् । जिल्लाको छत्रकोट गाउँपालिका वडा नं २ पल्लिकोटमा जन्मिएकी उनी सानै देखि डाक्टर बनेर दिनदु:खीको सहयोग गर्न चाहान्थिन् । उनको पढाई प्रतिको रुची पनि उत्तिकै थियो ।
डाक्टर बन्ने सपना देखेकी विमलाको जीवनमा सानै उमेरमा ब-ज्रपा-त आईलाग्यो । आमा र बाबाको माया पाउने उमेरमा उनले दुवैलाई गु-माउनु पर्यो । आमा बुबाको माया कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभव गर्न नपाएकी उनको जीवनमा सानै उमेरमा जिम्मेवारीको बो-झ आईलाग्यो ।
बाबुआमाको मृ-त्युपछि भाई बहिनी हुर्काउने जिम्मेवारीसगैं आफ्नै सपनासगं ल-ड्दाल-ड्दै उनलाई खुसीको महसुस जीवनमा कहिले भएन् । १० वर्ष अगाडी उनले बुबाको साथ गु-माउनुपर्यो । त्यस्तै बुबाको मृ-त्यु भएको ३ वर्षमा उनीसगंबाट दै-वले आमाको का-ख पनि खो-स्यो । आमाको नि-धन हुनेबेला उनी केही बुझ्ने भएकी थिईन् ।
आमाले आफु म-र्ने बेलामा छोरी तिम्रो स्वर राम्रो छ तिमी कलाकार बने है भनेर भनेपछि उनलाई आमाले भनेको शव्दले झ-स्का-ईर-ह्यो । आमाले म-र्ने बेला व्यक्त गरेको ईच्छालाई पुरा गर्नुपर्छ भन्ने उनलाई लाग्यो । डाक्टर बन्ने सपना त आमा बुबाको मृ-त्यु भएपछि आर्थिक अभावमा अब कसरी सम्भव होला र बरु आमाले व्यक्त गरेको ईच्छा पुरा गर्नुपर्छ भन्ने लागेर उनले गीतसगींत तिर पनि रुची देखाउन थालिन् ।
घाँस दाउरा मेलापात गर्दा होस् या उकाली ओराली गर्दा उनले जतिबेला पनि गीत गुन्गुनाई रहन्थिन् । उनको स्वर सुनेपछि सबै द-गं पर्थे । विविध समस्याहरुसगं ल-डिरहेकी विमलाको प्रतिभा खोज्दै गुल्मीका सञ्चारकर्मीहरु उनको घरमा पुगे । उनको स्वर दर्शकहरुले पनि औधी रुचाए । उनी एकाएक भाईरल बनिन् ।
दोहोरी गाउँदा गाउँदै स-न्ना-टा छायो । यसैक्रममा कृष्ण कडेंलले आफुलाई साँच्चिकै बुबा मान्न विमलालाई आग्रह गरे । यति भनिरहँदा विमलाले मन था-म्न सकिनन् । कृष्ण कडेंललाई झ-म्टि-एरै रु-न थालिन । विमलाको त्यो अवस्था देखेपछि कृष्ण कडेंलले एसईईमा राम्रो नतिजा ल्याएमा डाक्टर बन्ने सपना ईन्द्रेणी परिवारले पुरा गरिदिने प्रतिबद्धता जनाए ।
सोही अवसरमा उनलाई कृष्ण कडेंलले नगद २० हजार रुपैयाँ पनि सहयोग गरे । तिमी ईन्द्रेणीकै छोरी हौँ, मेरै छोरी हौ,एसईईमा राम्रो नतिजा ल्याएर उत्तिणर् गर डाक्टर बन्ने सपना हामी पुरा गरिदिनेछौँ । कृष्ण कडेंलले यत्ति भनेपछि उनलाई झनै मन स-म्हा-ल्नै गा-ह्रो भयो । आफ्नो सानै देखिको सपना पुरा हुने ठानेपछि उनले अहिले अफर आएका गीतहरु पनि रेकर्ड गर्न छाडेर अध्ययनका लागि गुल्मी फर्किएकी छिन् ।
राम्रोसगं अध्ययन गरेर डाक्टर बन्ने सपना पुरा गर्ने अठोटका साथ विमला गीत गाउन छाडेर गुल्मी फर्किएकी छिन् । उनलाई ईन्द्रेणीसम्म लिएर गएका पत्रकारहरु पनि विमलाको सपना पुरा गर्न पाएकोमा निकै खुसी छन् । उनीहरुले विमलालाई राम्रोसगं अध्धयन गर्न आग्रह गरेका छन् । विमलाले आफुले राम्रोसगं अध्धयन गर्ने र डाक्टर बन्ने सपना पुरा गर्ने बताएकी छिन् ।
रुकुम घटना का ५ रहस्य खुले। गाउँले सबै मिलि मारेका रैछन। आमाको षड्यन्त्र यस्तो रैछ। हेर्नुहोस।